november 2021 - NorSom News
Norsomnews - 29. november 2021
Daawo NorSom TV & Wararkii ugu danbeeyay ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay Norway
Dowlada oo soo rogtay xeerarkan, si looga hortago faafitaanka nooca cusub ee corona
Noocii cusbaa ee Corona oo Sweden laga helay.
Gudoomiye Raymond: Reer Oslo arrintan ha sameeyaan, si aan uga badbaadno in magaalada la xiro.
Norsomnews - 28. november 2021
R.W Jonas G. Støre: Waa inaan arrintan sameyno, si aan uga badbaadno in wadanka bandow la galiyo.
Norsomnews - 27. november 2021
Nooc cusub oo coronovirus oo Yurub soo gaaray
Norsomnews - 26. november 2021
Reysalwasaaraha Sweden oo iscasishay saacado kadib markii xilkaas loo doortay.
Norsomnews - 24. november 2021
Waa tuma gabadha Soomaalida ee loo haysto inay shaqsiyaad caan ah ka dhacday malaayiin dollar?
Katinka( UDI): Muuqaal kooban oo ka hadlayo barnaamijka Assistert retur: Hey´addahan ayaa nagala shaqeeya.
W.A.D Norway oo kulan canaan ah ugu yeertay safiirka Qatar ee Norway: Sababtan awgeed.
Telenor: Hadii fariintan(SMS) heshay, ha furin linkiga la socdo waa kooxo burcad ah.
Masud Gharahkhani oo loo badaniyo inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Norway.
Larvik: Sadex(3) qof oo ku geeriyooday shil diyaaradeed.
Norsomnews - 23. november 2021
Akhri: Tallaabooyinkan iyo xeerarkan cusub ee khuseeya soo-gelidda Norway.
Norsomnews - 22. november 2021
Daawo: Norway oo shuruuc cusub kasoo saartay soo galitaanka dalka & xeerarka cusub ee Corona
Jila NOAS: Dhibaatooyinkan ayay la kulmaan dadka sharci la´aanta ku ah Norway: Mid kamid ah xalalka waa assistert retur.
Oslo: Booliska, Dam-damiska iyo baabuurka gargaarka oo tababar ku qaadanayo masaajidada.
Daawo Wararkii ugu muhiimsanaa ee isbuucii tagay ka dhacay Norway iyo Yurubta kale
Norsomnews - 21. november 2021